ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် Montserrat အပျိုစင်အတွက်ဆုတောင်းခြင်း။ ? [+ အစွမ်းထက်! ]
အပျိုကညာမှဆုတောင်းပဌနာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်မွန်ဆာရတ် အားလုံး၏ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းအားဖြင့်လေးစား el Mundo၎င်းသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ မွန်ဆာရတ်တ်မှအပျိုစင်အမျိုးသမီးအားကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆုတောင်းခြင်းသည်အသင်းတော်၏ကိုယ်စားပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပျိုစင်မာရိ သူသည်သားအိမ်အတွင်းရှိဘဝကိုပြသခြင်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုကောင်းစွာသိပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်ကူညီနိုင်သည်။
1.1 ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် Montserrat ၏အပျိုကညာထံဆုတောင်းပါ
ငါဘယ်လိုသိတယ် la Morenetaတောင်ထိပ်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပြီးကတည်းကသင်၏အကူအညီလိုသူယုံကြည်သူတိုင်းအားအံ့ဖွယ်အမှုများမပေးနိုင်တော့ပါ။
၁၈၈၁ ခုနှစ်အထိဖြစ်သည် ခမညျးလီယို XIII သူမကို Catalonia မြို့၏ဂိုဏ်းချုပ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ် ဦး အဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ သူမကိုAprilပြီ ၂၇ တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
၎င်း၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်နှင့် ပတ်သက်၍ မူကွဲနှစ်ခုကိုလူသိများသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုထပ်မံခိုင်ခံ့စေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်လာသောပုံရိပ်ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ အံ့ဖွယ်အမှုများသည်တူညီသောအပျိုစင်မာရိ၏မျက်နှာကိုသာပိုင်ဆိုင်ထားသည်.
လှပသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏မယ်တော်၊ နာဇရက်မြို့မှချစ်လှစွာသောမေမေ၊ သခင်၏ကြီးမြတ်မှုကိုကြွေးကြော်ပြီး "ဟုတ်" ဟုပြောသောငါတို့သည်ကယ်တင်ရှင်နှင့်ငါတို့အမိ၏မိခင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့ငါသင်ပြုသောဆုတောင်းချက်များ ဘဝသစ်သည်ကြီးထွားလာသည်၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းများ
ထိုပျော်ရွှင်သောမွေးသက္ကရာဇ်တွင်သူတို့၏ပထမဆုံးအသံများကိုကျွန်ုပ်ကြားရပြီးသူတို့၏လက်များကိုတွေ့သောအခါသူသည်ကျွန်ုပ်အားပေးသောဤဆုကျေးဇူး၏အံ့ for မှုအတွက်ဖန်ဆင်းရှင်အားကျေးဇူးတင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုခိုလှုံရန်အမိုးအကာတစ်ခုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင့်ကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်များကိုစတင်ရန်အစလည်းဖြစ်သည်။
သူတို့သည်ခမည်းတော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံစားရပြီးကမ္ဘာထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသောကလေးတိုင်းသည်ကောင်းချီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသူတို့တွေ့ရှိပါစေ။
Sweet Wait of Our Lady, သူတို့ကိုမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ရဲစွမ်းသတ္တိပေးပါ။
မင်းကြိုက်လား ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် Montserrat ၏အပျိုကညာမှဆုတောင်းခြင်း?
သူမကိုယ်ဝန်ရှိနေသောအချိန်များ၌မီတာသည်သူတို့လုပ်နေကျပြောင်းလဲမှုသည်စိတ်ဆင်းရဲစရာအတွေးများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည် ငြိမ်းချမ်းရေး y တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု ဤကဲ့သို့သောအချိန်မျိုးတွင်သင်၌ရှိသင့်သည်ဟူသည့်အချက်ကြောင့်မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသောအခါဆုတောင်းခြင်းများသည်မည်သည့်နေရာတွင်သွားရမည့်ခိုလှုံရာဖြစ်လာနိုင်သနည်း။
မိခင်ကောင်းတစ် ဦး အနေဖြင့်သူမအားအကူအညီတောင်းသည့်အခါတိုင်းသူမကကျွန်ုပ်တို့၏ခေါ်ဆိုမှုသို့ရောက်လိမ့်မည်။
ငါတို့အတွက်ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်အတွက်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါဘူး။ ဆုတောင်းခြင်း ယုံကြည်ခြင်းနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ဖြင့်ပြုလျှင်၎င်းသည်တန်ခိုးအမြဲရှိသည်။